Tijaabada JBL Link Bar: codka codka ee telefishanada maahan caqli - TELES RELAY
ACCUEIL » TECH & TELECOM »Tijaabada JBL Link Bar: codka codka loogu talagalay TV-yada caqliga leh
JBL Link Bar waa saaxiibka ugufiican ee telefishanka qadiimka ah, oo laga reebay deegaanka sida Android TV.
Waa dhowr sano tan iyo markii dhawaaqa dhawaaqu ay soo weerareen Fnac, Darty iyo kuwa wax dubi jiray. Waa in la sheegaa inay leeyihiin wax walba oo ay ku farxaan: shardiga masraxa guriga, oo u baahan aqoon iyo rakibid isku dhafan, waxay ku jawaabaan si fudud. Iskusoo wada duuboo, waxay suurtogal ka dhigayaan inay hagaajiyaan dhalmada codka iyagoon hogaanka qabin, kuwa kuhadlaya telefishanada waligood dhibic xoog leh kuma jiraan (marka laga reebo moodaalada aadka u sarreeya). JBL Link Bar wuxuu uga taagan yahay tartamayaashiisa dood kale: wuxuu dirayaa Android TV.
Soundbar JBL Link Bar // Isha: JBL
Si kale haddii loo dhigo, Link Bar wuxuu damacsan yahay inuu ka dhigo mid caqli badan TV aan ahayn, ama sidoo kale waa mid da 'ah (sanadna isma beddeleyso), ama sababtoo ah nidaamkiisa hawlgalka ayaa dhexdhexaad ah (tusaale ahaan: Panasonic ). Ka sokow faa'iidooyinka acoustic-ka ee aan xaq u leenahay inaan ka filayno maqalka dhawaaqa, Link Bar wuxuu u oggolaanayaa marin u helka barnaamijyo badan oo waxtar leh, iyo sidoo kale Kaaliyaha Google.
Qaylo cod ah sida kuwa kale
Xiriirka loo yaqaan "Bar Bar" wuxuu u egyahay ... baal dhawaaqa. Haddii aan iska dhigno cabbirkeeda halkii laga soo rogi lahaa (in ka badan hal mitir dherer ah), waxay ku saleysan tahay naqshad miyir-qabad leh, oo loogu talagalay in lagu dhex-geliyo gudaha iyada oo aan keenin wax la yaab leh. Kaliya waa khiyaanay afarta barood ee yaryar ee iftiinka ee ku xidhan Kaaliyaha Google. Haddii kale, waxaan si gaar ah ugu mahadnaqeynaa dharkan acoustic-ka ah ee beddelaya xirmooyinka caadiga ah. Waxaan sidoo kale jecel nahay qaabkan wareegsan ee aan dhaawaceyn muuqaalka. Kaliya iska hubi in salka shaashaddaada uusan qarin dhererkiisa (6 sentimitir). Dusha sare, waxaa ku yaal batoono faa iido leh, iyo baddelaadda si loo jaro makarafoonnada.
JBL waxay ka fikirtay wax walba, oo ay ku jiraan isku darka isku xirnaanta dhameystiran. Marka ugu horreysa, waxaa jira seddex 4K iyo HDR tabinta HDMI ah oo loogu talagalay kuwa aan dooneynin inay maqlaan tikniyoolajiyadda ARC. Jid ahaan, waxay u oggolaaneysaa inay ku xirto aalado badan haddii TV-gaagu xadidan yahay halkaan. Dhibic aad u fiican. Marka la barbardhigo, iskuxirka 'Link Bar' ma ahan mid aad u la jajaban karo. Waxaa lala xiriirin karaa qalab hoosaad dheeri ah, laakiin ma jiraan lammaaneyaal ku hadla saameynta dhabta ah ee hareeraha ka jirta.
Barku wuxuu la imaanayaa koontarool yar oo fog oo taga aasaaska oo umuuqda qalab siyaada ah oo la imanaya sanduuqa TV-ga caadiga ah. Tilmaamo in la oggol yahay: ma oggola in la xakameeyo aaladaha kale.
Telefishanka Android ee ku yaal barta maqalka
Sidaa darteed Link Bar waa labadaba sanduuq dhawaaqa iyo sanduuq telefishan oo ay ku shaqeeyaan Android TV - mid haddii uusan ahayn habka ugu wanaagsan ee nidaamka hawlgalka marka loo eego astaamaha iyo codsiyada la heli karo. Halkan waxaan ku haynaa wax walba: Netflix (oo xitaa xaq u leh inuu ka gaabiyo jidkiisa fog), Amazon Prime Video, MyCanal, Molotov, RMC Sport ... Waxaa jira waxyaabo badan oo lagu helo farxad. Dabcan, isku xirka 'Link Bar' wuxuu la jaan qaadayaa tikniyoolajiyadda 'Chromecast'.
Adeegsiga, Link Bar waa mid aad u fiican
Adeegsiga, Link Bar waa mid aad u fiican: waxaan aragnaa qulqulka socodka iyo barnaamijka TV-ga ee Android, haddii uusan qurux badnayn, waa mid wax ku ool ah oo leh qaabkiisa toosan iyo jiifa. Haddii loo baahdo, waxaa suurtagal ah in la diyaariyo soo dhoweynta iyadoo la soo bandhigayo kaliya kanaalada xiisaha noo qaba. Ugu dambeyntii waxaa jira tab 'My xulasho' si dhakhso leh u gala barnaamijyada la ciyaarayo. Waxay ku habboon tahay kuwa cunaya taxane badan.
Haddii fogaanku leeyahay badhan u hibeeya Kaaliyaha Google, waxaa suurtogal ah in codsi sir ah oo macmal ah lagu sameeyo codka oo keliya, adigoo leh 'Ok Google' (tusaale ahaan in la bilaabo barnaamijka Netflix). Waxaan si cad u helnay faa'iidooyinka kaaliyaha oo dhan marka loo eego ergonomics (xitaa haddii aan jeclaan lahayn inaan bakhtiin karno baarka adigoon riix badhan lahayn). Si kastaba ha noqotee, waxaan la kulanay dhibaatooyin qaar si aan u dhameystirno qaabeynta Google Assistant, taas oo ka hortageysa marin u helista amarrada qaarkood. Halkaan, barta 'Link Bar' waa mid aad u xiisa badan.
Way ka fiican yihiin kuwa hadla
Markaad u bartay inaad ku daawato filimada leh tiyaatarka guriga, dhab ahaan aad u xalliso muuqaalku wuxuu u muuqan karaa mid dhib badan. Arinta 'JBL Link Bar', durba waa la dhihi karaa iyadoon dhibaato badan laheyn wuxuu aasaa intiisa badan kuwa ku hadla ee laga helo telefishanka (badanaa cillad weyn). Iyada oo la adeegsanayo dhawaaqa dhawaaqa, waxaan ka faa'iideysannaa cinwaanada si aad ah u fahamsan oo cad, iyadoo aan loo baahneyn in aan riixno mugga (oo aan ku qarxinno gorgorrada inta lagu guda jiro ganacsiga). Haddii kale, Iskuxirka Xaraashka wuxuu si toos ah u tilmaamayaa soo dejintiisa, oo leh waxyaabo isku duuban iyo marxalad dhawaaq oo diiradda saaraya in badan. Qalabka barbardhiga ayaa laga heli karaa menu, marka laga reebo inaysan u oggolaanin inay riixdo goobaha aad u fog.
Waxaan sidoo kale ku eedayn karnaa sheyga dhaqdhaqaaqyadiisa daciifka ah, khaladka bass ee ku dhibtoonaya inuu caddeeyo jiritaankooda (laga yaabee sanduuqa inuu wax yar ka caawiyo). Aflaanta aadka u hawl badan, mararka qaar way adkaan doontaa in la dareemo saameynta ficilada waaweyn. Taas waxaa dheer, Link Bar waa mid aad u raaxo badan marka ay timaado maareynta ifafaalaha murugada, xitaa iyadoo wax yar riixeysa, halka aysan dhib ku qabin soo celinta muusikada oo leh waxqabadka wanaagsan . Caddayn in, guud ahaan, isu-dheellitirku uu hagaagsan yahay. Si loo sii socdo, waxay si fudud uga dhigaysaa mid qaali ah ... ama waxay ku bataa qolka fadhiga iyada oo lahadleyso.
Faahfaahin muujin: 3 / 5
Qalabka dhawaaqa, sanduuqa telefishanka ee TV-ga Android iyo kan ku xiran, Link Bar wuxuu ku fiicanyahay waxna ma dareemayo markaad rabto inaad riixdo wax aad u fog. Waxaa si gaar ah loogu talagalay dhagaystayaal aad u qaas ah: kuwa jeclaan lahaa inay telefishinadooda ka dhigaan mid caqli badan. Kuwa ay quseyso, waa qiimo dhab ah oo lagu daray.
Sanduuqa qaybtan, 'Bar Bar' waa mid aad u qancin leh. Waxaa si kastaba ha noqotee laga helay waxoogaa xiisaha leh Kaaliyaha Google (qaabeynta). Dhinaceeda, iyadu way dhibtootay iyada oo aan dhib ku qabin kuwa ku hadla TV-ga (duug ah). Laakiin waxaan si fiican uga heli karnaa sicirkaan. Haddii aadan xiiseyneynin qaybta TV-ga Android, iska tag.
Saddex HDMI-yo ah
Waa xoogaa deggan
Waxaan bixinnaa Android TV
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://www.numerama.com/tech/568176-test-de-la-jbl-link-bar-la-barre-de-son-pour-les-teles-pas-intelligentes.html#utm_medium=distibuted&utm_source=rss&utm_campaign=568176